Kediska bisha Ramadaan ee xaafadaha Puntland oo lasoo gabgabeeyay | Golis Telecom Somalia
Kediska bisha Ramadaan ee xaafadaha Puntland oo lasoo gabgabeeyay
Munaasabad lagu maamuusayay gabgabada tartan aqooneedka kediska xaafadaha Puntland kaas oo soconayay intii lagu gudajiray bishii barakaysnayd ee Ramadaan ayna si wadajir ah u wadeen shirkadda isgaarsiinta Golis iyo warbaahinta SBC ayaa lagu qabtay hotelka Jubba ee magaalada Boosaaso.
Masuuliyiin kala duwan ayaa ka qayb galay xafladda kuwaas oo ay kamid ahaayeen gudoomiyaha gobalka Bari Yuusuf Maxamed Wacays (Dhedo), duqa magaalada Boosaaso Maxamed Siciid Shabeele, wasiirka xanaanada
xoolaha Puntland C/Jamaal Cismaan Maxamed, mulkiiilaha warbaahinta SBC Cali Cabdi Awaare iyo masuuliyiinta sare ee shirkadda Golis Telecom Somalia.
Tartankan oo ay ka qayb galeen 24 xaafadood oo kamid ah xaafadaha magaalooyinka iyo dagmooyinka Puntland ayaa waxaa wareeggii kama dambaysta isugu soo haray xaafadaha 26ka Juun oo ku taal magaalada Boosaaso iyo xaafada 1da August oo ku taal magaalo madaxda Puntland ee Garowe kuwaas oo maanta lagu tartansiiyay goobta xafladdu ka dhacaysay.
Gunaanadkii tartanka labada xaafadood oo la waydiiyay min 5 su’aalood ayaa waxaa gudigii garsoorka tartanka ay ku dhawaaqeen natiijada kasoo baxday oo noqotay in xaafada 1da August ee magaalada Garowe ay guushu raacdo islamarkaana ay sidaasi ugu guulaysatay koobkii kediska xaafadaha Puntland sanadka 2015ka waxana koobka kaalinta labaad ku guulaysatay xaafadda 26a juun iyagoo la kala gudoonsiiyay bilado iyo abaalmarin lacageed oo ay ku mutaysteen kaalmahan dahabiga ah ay soo gaareen. Kadib markii la guda galay khudbadaha masuuliyiinta ayaa mulkiilaha Televisionka iyo idaacadda SBC Cali Cabdi Awaare uu u mahadceliyay cid walba oo gacan ka gaysatay qabsoomida tartankan isagoo si gaar ah u xusay shirkadda Golis oo uu tilmaamay inay qayb libaax ka qaadanaysay 9kii sano ee SBC uu ka baxayay tartan aqooneedkan.
Hogaanka xiriirka dadwaynaha shirkadda isgaarsiinta Golis Faarax Xaaji Mire ayaa dhankiisa u hambalyeeyay labada xaafadood ee isugu yimi wareegga kama dambaysta ah oo uu xusay inay labaduba guulaysteen isagoo intaas kadibna iftiimiyay sida ay Golis mar walba ugu heelantahay bushadeeda inay kala qayb qaadato wax walba oo qayb ka qaadan kara wanaageeda iyo horumarkeedaba.
Gudoomiyaha gobalka Bari Yuusuf Maxamed Wacays (Dhedo) iyo duqa magaalada Boosaaso Maxamed Siciid Shabeele oo kalado ka jeediyay munaasabada ayaa labaduba u mahadceliyay warbaahinta SBC iyo shirkadda Golis sida wanaaagsan ee ay barnaamijkan usoo wadeen sanadaha faraha badan.
Intii ay munaasbadu socotay shirkada Golis waxay marti sharaftii madasha joogtay kaga farxisay hadiyado lagu helayay bakhtiyaanasiib loo soo bandhigay iyadoo qof walba oo maanta xaflada ka qayb galay uusan bixin isagoon helin hadiyad kamid ah hadiyadii ay shiraddu u hibaysay marti sharafta oo ay ugu yarad 2$ oo ah daqiiqado hadal ah.
Ugu dambayn waxaa shahaadooyin la gudoonsiiyay dadkii doorka fiican ka qaatay hab u socodka tartanka oo ay kamid ahaayeen guddigi garsoorka, shaqaalaha idaacadda iyo TV-ga SBC iyo shahaadooyin ay is waydaarsanayeen maalgaliyayaasha barnaamijka iyo warbaahinta SBC.
Tartan aqooneedka Kediska bisha Ramadaan ee lagu tartansiiyo xaafadaha Puntland ayaa sanad walba ay qabataa warbaahinta SBC waxana maalgalintiisa qayb libaax ka qaadata shirkadda isgaarsiinta Golis iyagoo ku kasbaday qabashadiisa ixtiraamka iyo dareenka shacabka.